Madaxa ergada Q. Midoobay oo sheegay in Syria ay lugaha lagashay dagaal sokeeye – SBC
Madaxa ergada Q. Midoobay oo sheegay in Syria ay lugaha lagashay dagaal sokeeye
Posted by Webmaster on June 13, 2012 Comments
Dimishiq:- Madaxa ergada QM ee dalka Syria oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Dimishiq ayaa u sheegay warfidiyeenada in uu xaqiijinayo in dalka Syria uu kujiro dagaal sokeeye, maadama xukuumadda Syria ay gacanteeda kabaxday magaalooyin ay hadda gacanta ku hayaan mucaaradka.
Laanqeyrta cas ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda dalka Syria ay sii xumaanayso xilli dagaalada ay sii xoogeesanayaan taasi oo keeni karta in ay adkaato in gargaar loo fidiyo.
Dhanka kale xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka Hillary Clinton ayaa carabaabtay cabsida laga qabo in xukuumadda Russia ay u dirto dalka Syria diyaaraha qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopters.
Afhayeenka kale mucaaraka hubaysan ee dalka Syria ayaa sheegay in ciidamadooda ka baxeen magaalada Al-xafa kadib duqeyn culus oo uga timid dhanka ciidanka xukuumadda Syria.
Mar sii horeysay Gudoomiyaha cusub ee golaha qaranka Syria C/baasid sayda ayaa sheegay in faragelin melatari lagu sameeyo dalka Syria aysan dhici Karin ilaa ogolaansho laga helo golaha amaanka.
Sayda oo qabtay shirkiisa jar’aaid kadib markii uu la wareegay xilka ayaa ugu baaqay mas’uuliyiinta xialalka ka haysa maamulka madaxweyne Asad in ay iscasilaan islamarkaana ay ku soo biiraan golaha qaranka KMG .
Sidoo kale siida ayaa ugu baaqay ciidanka in ay sameeyaan gadood islamarkaana ay ku biiraan ciidanka xorta.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Butin ayaa markale ku celiyey sida uu uga soo horjeedo faragelin meltari dalka Syria. waxana uu sheegay in xoog uusan suurtagal ahayn si loo joojiyo dhiiga ku daadanaya dalkaas.